စက္ကူထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများတွင် China 606 / 400L - နိုင်လွန်ပစ္စည်းနိမ့်ကျသည့်သန့်စင်ဆေးရည် ယူနန်
စက္ကူပြုလုပ်သည့်စက်ရုံတွင် 606 / 400L- နိုင်လွန်ပစ္စည်းအနိမ့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသန့်စင်ခြင်း
အနိမ့်သိပ်သည်းဆသန့်စင် application ကိုဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကတ်ထူပျော့ဖတ်စက္ကူစက်, ကတ်ထူပြားပျော့ဖတ်သန့်ရှင်းရေးဖြစ်ပါသည်စက္ကူပျော့ဖတ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်စသည်တို့ကိုအသေးစားကြမ်းတမ်း granules, မြှုပ်များ, ပလပ်စတစ်နှင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အသုံးပြုသည့် pulping ပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီးပျော့ဖတ်နှင့်ကြက်ဥထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ အမျိုးအစားအသစ်အကြီးစားထိရောက်သောသန့်ရှင်းရေး YF Heavy Impurity Cleaner သည်ကျောက်စရစ်၊ သံအပိုင်းအစများ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်မှင်အမှုန်များကဲ့သို့သောမိုးသည်းထန်စွာအညစ်အကြေးများကိုအဓိကအားဖြင့်d...
YF Heavy Impurity Cleaner သည်အဓိကအားဖြင့်ကျောက်စရစ်ခဲအမျိုးမျိုးမှကျောက်စရစ်၊ သံအပိုင်းအစများ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်မှင်အမှုန်များကဲ့သို့သောလေးလံသောအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားရန်အဓိကအသုံးပြုသည်။ အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုကိုက်ညီမှုသည် ၂% သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးဖိုင်ဘာဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် section.High ယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးအတွက်ပြာအကြောင်းအရာစုဆောင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားသော cleaner.High သန့်ရှင်းရေးထိရောက်မှု၏နံပါတ်များ, ပိတ်ဆို့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အမျိုးအစား YF400 / 600
တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဖြတ်နိုင်စွမ်း (l / min) 400-480
အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန် (ºC) 70
အများဆုံးလည်ပတ်မှုဖိအား (Mpa) 0.4
ဝင်ပေါက်ကိုက်ညီမှု (%) %2%
အဝတ်လျှော်ရေစီးဆင်းမှု 20-60l / min
YF600 စီးရီးမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လေးလံသောဖယ်ထုတ်စက်များကိုပျော့ဖတ်အမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီးကျန်သောသန့်ရှင်းရေးနှင့်ခွဲထုတ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်မှာအမျိုးမျိုးသောပျော့ဖတ်စက်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည့် slag ဖယ်ရှားရေးကိရိယာများ။
YF600 အမျိုးအစား slag remover ၏နိယာမနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ
ခွဲထားသောဖွဲ့စည်းပုံအတွက်သန့်ရှင်းရေး၊ သန့်ရှင်းရေးတစ်ခုလုံးကို ၃-၄ ပိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်။
2, slag ဥတု၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ
အသုံးပြုသူများကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များအရ slag discharge နည်းလမ်းများရွေးချယ်ရန်၊ အသုံးပြုသူ၏ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန်။
၄။ slurry pipe တစ်ခုစီသည် slagger branch ၏ hose နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး system တစ်ခုလုံး၏တစ်ခုတည်းသော slagger သို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အသုံးပြုရန်အဆို့ရှင်တပ်ဆင်ထားသည်။
5. ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများမရှိပါ, တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေး။
1, သဲ, ကျောက်စရစ်ခဲ, သံဝါယာကြိုးများနှင့်အခြားလေးလံသောအညစ်အကြေးများတွင် slurry ကိုထိထိရောက်ရောက်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်;
2, ပမာဏတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နောက်ထပ် slag ပါဝါ, အတော်လေးဖိုင်ဘာဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချ;
4. သိသာ slurry ချွေတာအကျိုးသက်ရောက်မှု။
ရှေ့သို့ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုမှကာကွယ်သော 95 alumina Ceramic ring liner
နောက်တစ်ခု: centri-cleaner Papermill အတွက်အသုံးပြုခြင်းကိုမပျော့ဖတ်ခင်ဆန်ခါမပြုမီ